November 1, 2021 N88LeaveaComment on धनतेरसमा यी ५ पहेँलो वस्तु मध्ये कुनै एक किन्नुहोस्, घरमा हुनेछ पैसाको वर्षा
धनतेरसमा किनमेलको लागि उत्तम समय हो। यस दिन मानिसहरूले नयाँ चीजहरू किन्छन्, दान गर्छन् र भगवान धन्वंतरीको पूजा गर्छन्।यस दिन पहेँलो वस्तु किन्नु शुभ मानिन्छ। आउनुहोस् जानौं धनतेरसमा कुन ५ पहेँलो वस्तु किन्दा धन समृद्धि आउँछ र वर्षभरि आशिष् रहिरहन्छ। १. सुनः यस दिन सुनका गहना किन्ने चलन पनि छ । सुन लक्ष्मी र वृहस्पतिको […]
राष्ट्र बैंकले बेच्न थाल्यो सुन चाँदीको सिक्का, कहाँ पाइन्छ किन्न ?
November 1, 2021 N88LeaveaComment on राष्ट्र बैंकले बेच्न थाल्यो सुन चाँदीको सिक्का, कहाँ पाइन्छ किन्न ?
काठमाडौं । हिन्दुहरुको चाड तिहारको अवसर पारेर धनवन्तरीमा राष्ट्र बैंकले सुन र चाँदीको सिक्काको बिक्री सुरु गरेको छ । काठमाडौं बबरमहलस्थित टक्सार विभागबाट राष्ट्र बैंकले सुन चाँदीको सिक्का सोमबारबाट विक्री सुरु गरेको हो । धनवन्तरीमा असर्फीको माग धेरै हुने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सहज तरिकाले असर्फी र सुन तथा चाँदीका सिक्का बिक्री खुला गरिएको […]
प्रचण्डले दिए घमण्डले भरिएको अहँकारपूर्ण यस्ताे अभिव्यक्ति
November 1, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्डले दिए घमण्डले भरिएको अहँकारपूर्ण यस्ताे अभिव्यक्ति
काठमाडौं। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिको केन्द्रमा माओवादी नै भएको दाबी गरेका छन् । सोमबार कीर्तिपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले माओवादीको साथले नै गठबन्धनबाट ६ वटै प्रदेशमा ओली प्रवृति परास्त गरेको बताएका हुन् । प्रचण्डले माओवादीलाई साथ दिँदा राष्ट्रिय हित हुन्छ भन्ने जनतामा भाव पैदा हुन थालेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले […]
प्रचण्डकाे गृहजिल्लामा केपी ओलीकाे हुङ्कार ‘एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउँछ’
November 1, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्डकाे गृहजिल्लामा केपी ओलीकाे हुङ्कार ‘एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउँछ’
चितवन । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी संसदीय निर्वाचनमा पार्टीले एकल बहुमत ल्याउने बताउनुभएको छ । नेकपा (एमाले) भरतपुर महानगर कमिटीको प्रथम महानगर अधिवेशनमा आज यहाँ उहाँले कसैसँग नमिलिकनै एमालेले बहुमत ल्याउने बताउनुभएको हो । पार्टीको १०औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेर निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामीले एकल बहुमत ल्याउनुपर्छ । प्रत्यक्षमा […]
‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ बन्द : यस्तो छ बन्द हुनुको कारण !
November 1, 2021 N88LeaveaComment on ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ बन्द : यस्तो छ बन्द हुनुको कारण !
काठमाडाैं । हाँस्य कलाकार जितु नेपालले संचालन गर्दै आएको रियालिटी शो ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’को प्रशारण आउँदो सातादेखि बन्द हुने भएको छ । डेढ बर्ष भन्दा लामो समयदेखि नेपाल टेलिभिजनमा प्रशारण हुँदै आएको यो शो आउँदो साता प्रशारण भएपछि बन्द हुने यसका संचालक जितु नेपालले पुष्टी गरे । जितुले यो शो बन्द भएपछि आफूले केही समय […]
ओलीले ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर गणतन्त्र उल्ट्याउने खेल खेल्दैछन् भन्दै कुर्लिए प्रचण्ड !
November 1, 2021 N88LeaveaComment on ओलीले ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर गणतन्त्र उल्ट्याउने खेल खेल्दैछन् भन्दै कुर्लिए प्रचण्ड !
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को आरोप प्रत्यारोप जारी छ । प्रचण्डले चितवन पुगेर ओलीमाथि बालुवाटारमा करोडौंको बिलासी समान किनेको आरोप लगाए, लगत्तै ओलीले खण्डन गरे । चितवनबाट काठमाडौं आएका प्रचण्डले ओलीमाथि अर्को आरोप लगाएका छन्, ज्ञानेन्द्रका मान्छेहरुलाई भेटेर मौका आयो भने गणतन्त्र उल्ट्याउने हो […]
November 1, 2021 N88LeaveaComment on पाठेघरको क्यान्सर कसरी पत्ता लगाउने ?
काठमाडाैं । बायोलोजिकल कारण पनि महिलाको स्वास्थ्य पुरुषको तुलनामा अलि बढी संवेदनशील हुन्छ । जसका कारण पुरुषमा भन्दा केही बढी स्वास्थ्य समस्या महिलामा देखिने गर्छ । खासगरी, प्रजनन उमेर समूहका महिलालाई सामान्यदेखि जटिल स्वास्थ्य समस्याले सताइरहने हुन्छ । ती जटिल स्वास्थ्य समस्या अन्तरगत महिलाकाे पाठेघरमा देखिन क्यान्सर प्रमुख हाे। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार महिलाहरुलाइ सवैभन्दा बढी देखिने क्यान्सरहरुमध्ये […]
आँटिली अनिता विदेशबाट फर्केर कृषिबाट वार्षिक डेढ करोड आम्दानी
November 1, 2021 N88LeaveaComment on आँटिली अनिता विदेशबाट फर्केर कृषिबाट वार्षिक डेढ करोड आम्दानी
अञ्जली थापा मकवानपुर । मनहरी गाँउपालिका–५ कि अनिता स्याङ्बोले कृषिबाट वार्षिक करीब रु एक करोड ५० लाख आम्दानी गर्ने बताउनुभएको छ । रु एक करोडको लगानीमा शुरु गरिएको कृषि फारमबाट उहाँले वार्षिक रु दुई करोडसम्म आम्दानी गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ । उहाँले एक वर्ष अगाडि अनु एकीकृत कृषि फार्म दर्ता गरेर लोकल जातका कुखुरा, माछा, […]
यसरी बनाउनुहाेस् लक्ष्मीपूजामा आकर्षक रंगाेली (भिडियाे)
November 1, 2021 N88LeaveaComment on यसरी बनाउनुहाेस् लक्ष्मीपूजामा आकर्षक रंगाेली (भिडियाे)
काठमाडाैँ । दीपावली अर्थात तिहारकाे अवसरमा घर आगनमा रंगाेली बनाएर सजाउने चलन बिस्तारै नेपाली परम्परा बन्दै गएकाे छ । भारतमा दीवाली तथा नेपाल कै पनि मिथिला क्षेत्रमा रहेकाे याे प्रचलन अहिले पछिल्लाे समयमा आएर उपत्यका एवं पहाडी क्षेत्रमा पनि प्रलनमा छ । हुन त याे दक्षिण भारतकाे तमिलनाडु, केरल तथा महाराष्ट्रमा बढी प्रचलनमा छ । […]
ओलीको क्रेजः चितवन जाँदा बीच बाटैमा स्थानीयले गरे स्वागत
November 1, 2021 N88LeaveaComment on ओलीको क्रेजः चितवन जाँदा बीच बाटैमा स्थानीयले गरे स्वागत
काठमाडौँ, १५ कात्तिक । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चितवन जाँदा बीच बाटैमा रोकेर स्थानीयले स्वागत गरेका छन् । दुईदिने चितवन बसाइँको कार्यक्रममा सडकमार्गबाट गएका ओलीलाई स्थानीयले बाटोमै स्वागत गरेका हुन् । ओली केही नेताहरूसहित काठमाडौँदेखि सडकमार्ग हुँदै चितवन गए उनले दासढुंगादेखि प्रस्तावित अयोध्याधामसम्म पुग्ने ओलीको कार्यक्रम छ । ओलीलाई बीच बाटैमा […]